RASMI: Frank Lampard oo xaqiijiyey in heshiiska Edouard Mendy uu dhammaaday, laacibkuna uu hadda tijaabada caafimaad u marayo Blues – Gool FM
(London) 22 Sebt 2020. Macallinka Kooxda kubadda Chelsea ee Frank Lampard ayaa xaqiijiyey in heshiiska Edouard Mendy uu yahay mid dhammaaday, iyadoo goolhayaha uu haatan tijaabada caafimaad u marayo Blues.
Frank Lampard ayaa xusay in kooxda Chelsea ay ku guuleysatay saxiixa Goolhaye Edouard Mendy oo kaga soo wareegaya dhinaca naadiga Rennes.
Tababaraha Blues ayaa xaqiijiyay maanta oo Talaado ah saxiixa Mendy, waxaana uu yiri: “Haa, Mendy wuxuu marayaa tijaabada caafimaadka sida aan hadda ka hadlayno, marka la eego inay taasi caadi tahay, markaas kaddib wuxuu noqon doonaa ciyaaryahankeena.”
Goolhaye Edouard Mendy ayaa la filayaa in kooxda Chelsea ay ku dhawaaqdo saxiixiisa saacadaha soo aaddan.
Faah-faahinta heshiiskiisa waan idiin soo gudbin doonaa inshaa Allaah.